သောသီခို: ကချင်ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အတွက် KNO-Thailand ဖွဲ့စည်း
မြန်မာအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရကြား ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုများ ပြုလုပ်နေကြချိန် ပြည်ပအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အနေဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမအောင်မြင်သေးသရွေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူသွား မည် မဟုတ်ကြောင်း KNO ဥက္ကဋ္ဌ ဒူဝါဘောမ်ဝမ် လရော် (Duwa Bawmwang Laraw) က ပြောသည်။
အဆိုပါ ချင်းမိုင်တွင် သီးသန့်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO) ကို ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကရဲန်ခေါင်ဟောင်း (Kareng Hkawng Hawng)၊ ဒုတိယ တာဝန်ခံအနေဖြင့် ဦးလရှီးဘရန်နူး (Lashi Brang Nu) နှင့် အင်ခွမ်ဇော်ဂရောင် (Nhkum Zau Grawng)၊ အတွင်းရေးမှုး နန်ဇိန်နော်လောန် (Nangzing Naw Lawn)၊ ဒုအတွင်းရေးမှူးအား လရှီးဂမ် (Lashi Gam) နှင့် အင်ခွမ်ဇော်ဂမ် (Nhkum Zau Gam) တို့ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted by ဇင်ယော် at 3:22 AM
Thuya Aung Aung said...
I like this very much because we have to stand on our own standing point. We have to make clear our goal. What we are fighting for? Whom we are fighting for? Why we have to give our life to revolution?